एक दिन साबरमती आश्रमको नजिकै कुनै गाउँका मानिसहरु महात्मा गान्धीनजिक आए र भन्न थाले, ‘हामीले गाउँमा एक सभाको आयोजना गरेका छौं । तपाईंले पनि समय निकालेर आउनुहोस् र हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहोस्, यसबाट हामीलाई ठूलो कृपा हुने थियो ।’
गान्धीले भोलिपल्टको कार्यक्रम हेरे, समय खाली देखेपछि सोधे, ‘कार्यक्रम कतिबजे आयोजना हुन्छ ?’ एक कार्यकर्ताले भने, ‘हामीले चार बजे निश्चित गरिसकेका छौं ।’
गान्धीले समय मिल्ने भएपछि हुन्छ भने । कार्यक्रममा आउने जानकारी दिए । एक कार्यकर्ताले भने, ‘बापू, भोलि म एक घण्टा अगाडि नै गाडी पठाउनेछु, ताकि यहाँलाई कुनै अप्ठेरो नहोस् ।’ गान्धीले भने, ‘ठिक छ, म निश्चित समयमै तयार हुनेछु ।’
भोलिपल्ट पौन चार बजेसम्म पनि गान्धीको आश्रममा कोही आइपुगेनन् । तब गान्धी चिन्तित भएर सोच्न थाले, म समयमै पुगिन भने जनताले के भन्लान् ? उनीहरुको समय व्यर्थमा नष्ट हुनेछ । गान्धीले एउटा उपाय निकाले र त्यसैअनुसार गरे ।
केही समयपछि उक्त कार्यकर्ता गाडी लिएर गान्धीलाई लिन आश्रममा पुगे, त्यहाँ त गान्धी भेटिएनन् । उसलाई आश्चर्य लाग्यो । ऊ कार्यक्रम स्थलमा फर्कियो । जब ऊ कार्यक्रमस्थलमा पुग्यो, त्यहाँ त गान्धी भाषण दिइरहेका थिए र सबै मासिनहरु एकचित भएर उनलाई सुनिरहेका थिए ।
भाषण सकिएपछि जब गान्धीसँग उक्त कार्यकर्ताले भेटे, तब उनले सोधे, ‘म यहाँलाई लिन आश्रम पुगेको थिएँ, तर हजुरलाई मैले आश्रममा भेटिन, फेरि हजुर यहाँसम्म कसरी आउनुभयो ?
गान्धीले भने, ‘जब तपाईं पौने चार बजेसम्म पुग्नुभएन, तब मलाई चिन्ता भयो । यसकारण मैले साइकल खोजेँ र त्यसैमा चढेर यहाँसम्म आएँ ।’ यो सुनेर ती कार्यकर्ता लज्जित भए । उसलाई सम्झाउँदै गान्धीले भने, ‘समय धन हो, यसलाई व्यर्थैमा नगुमाउनुहोस् ।’